Fampianarana – Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM)
Fampianarana Soratra Masina « NY BOKY ISAIA »
FITARIHANTENY Ny KMSL dia nanapaka fa bokin’ny Romana no ianarana amin’ity taon-jobily ity. Isika FIFIL dia nanomboka mianatra ny bokin’i Isaia satria isika manana ny teny faneva hoe: “Indro, efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako ianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva.” Isa.49:16, hitarihana ny Zaikabe VII any Antsiranana amin’ny 7-12 Aogostra 2018. Hojerentsika mandritra ny oratelo ato anatin’ny telo […]
Inona moa ny PENTEKOSTA? Ao amin’ny TT dia antsoina hoe “fetin’ny herinandro.” Ny anarany feno dia ny hoe חַגשָׁבֻעוֹת (chag shavu’ot, firavoravoan’ny herinandro na fetin’ny herinandro). Ny dikany ara-bakiteny dia “herinandro » (pluriel). Izy io dia ankalazaina amin’ny faha-6 n’ny volana Sivan, izay matetika mitontona amin’ny volana Mey sy Jona. Ny Shavuot dia 50 andro aorian’ny Pesach (Paska Jiosy) Ity […]
DIDY I : “AZA MANANA ANDRIAMANI-KAFA FA IZAHO IHANY” (EKS 20: 3) Heviny, araka ny fampianaran’i Lotera: “Tsy maintsy hatahotra sy ho tia ary hatoky an’Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra isika”. -oOo- DIDY II: “AZA MANONONA FOANA NY ANARAN’I JEHOVAH ANDRIAMANITRAO FA HATAON’I JEHOVAH HO MANAN-TSINY TOKOA IZAY MANONONA FOANA NY ANARANY” (EKS 20: 7). Heviny araka ny fampianaran’i Lotera: […]
Mba hahafahantsika mahafantatra ny fahamarinana dia andao hojerentsika ny Genesisy 1:27 : “Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; LAHY sy VAVY no namoronany azy”. Miainga amin’io andinin-tSoratra Masina io dia afaka mino marimarina isika fa nozarain’Andriamanitra ho karazany roa miavaka tsara ny olombelona dia ny LAHY sy ny VAVY (Fr: IL et […]
Raha tsy Jehovah Andriamanitra tenany no manome ny vady (na ho an’ny lahy io na ho an’ny vavy) dia tsy azo antoka izay zavatra mety hitranga. Hita sy voamarina mantsy fa i Adama dia tsy nahita vady sahaza ho an’ny tenany na dia navela hisafidy aza izy. Fa raha vantany vao nahary an’i Eva kosa Jehovah Andriamanitra ka nitondra azy […]
Zava-dehibe loatra amin’ny fampianaran’i Lotera ny amin’ny fiainana mandrakizay. Raha tsy misy hoy izy ny fiainana mandrakizay dia tsy misy antony tokony hitandrematsika ny didy voalohany. Fa inona moa no ilana an’Andriamanitra raha ity fiainana ity ihany, fa na dia ireo tsy miraharaha an’Andriamanitra aza dia mba afaka mifaly amin’ity fiainana ity ihany. Nefa misy Andriamanitra ka tsy eto amin’ity […]
Asehon’i Lotera ho ivon’ny famonjena ny asam-pamonjena lehibe sady tokana nataon’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazo fijaliana. Asan’Andriamanitra ivelan’ny olona izany fa natao ho an’ny olona kosa na « extra nos, pronobis ». Andriamanitra hetsehin’ny fitiavany no nanolotra ny Zanany Lahitokana ho Mpamonjy izao tontolo izao. Ary dia vokatr’izany asam-pamonjena nataon’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy izany no anamarinana ny olona […]
Raha milaza ny amin’ny olombelona indray i Lotera dia soritany mazava tsara fa ny olombelona dia noharina araka ny endrik’Andriamanitra. Koa talohan’ny nidiran’ny fahotana dia tsara sy madio ary tsy nisy fahotanana izy. Ka na ny sainy na ny sitrapony dia marina sy nahitsy avokoa. Raha milaza ny amin’ny fahatsaran’ny olona talohan’ny fahalavoana sy ny naha noharina araka ny endrik’Andriamanitra […]